IZwi likaNkulunkulu unegunya
IZwi likaNkulunkulu unegunya IZwi, iqiniso, imfundiso kanye nemisebenzi emihle okwakuthandelene kanye nolimi.
Kuzoba ezinsukwini zokugcina abaprofethi bamanga ...
Kuzoba ezinsukwini zokugcina abaprofethi bamanga ... Mathewu 7:15 Xwayani abaprofethi bamanga. Beza kini bembathise, kepha ngaphakathi bayizimpisi ravening kwezimpisi. Mathewu 24:11 Futhi abaprofethi abaningi bamanga sizavukela, futhi baduhise abanengi. Mathewu 24:24 Ngokuba...
UNkulunkulu uYise, uNkulunkulu iNdodana noNkulunkulu uMoya Ongcwele kuNkulunkulu oyedwa.
UNkulunkulu uYise, uNkulunkulu iNdodana noNkulunkulu uMoya Ongcwele kuNkulunkulu oyedwa. Marku 16: 16 Lowo okholwayo futhi abhapathizwe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyakulahlwa. Isaya 44: 6 Usho kanje uJehova, iNkosi ka-Israyeli, noMhlengi wakhe, uJehova Sebawoti, uthi:...
UJesu bangenza Singabheka emhlabeni wonke singazitholi lutho ukuthi kwanelisa inhliziyo yethu: UJesu kuphela.
Johane 14: 6
Johane 14: 6 UJesu wathi: Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami.
UNKULUNKULU WALITHANDA WORLD
UJOHANE 3: 16 UNKULUNKULU WALITHANDA WORLD Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade.